ကိုဗစ်ရောဂါ အတွက် အဓိကလှူဒါန်းနေတဲ့ မြန်မာပြည်က ထိပ်တန်း သူဌေးကြီးများစာရင်း – celepublic
၁. ဦးဇောျဇောျ MAXဆီဆိုငျ MAX Group. AYA ဘဏျ
၂. ဦးအောငျကိုဝငျး KBZ air line. KBZ ဘဏျ
၃.ဦးဇောျမိုးခိုငျဇနီးဒေါကျတာစောနနှေယျ AA ဆေးနှင့ျဆေးဝ ါးပစ်စညျ းထုတျ ကုမ်ပဏီ
၄. အဂ်ဂမဟာသီရိ သုဓမ်မမဏိဇောတဓရဘှဲ့ရ ဦးစိုငျးမြိုးဝငျးဇနီး အဂ်ဂမဟာသီရိသုဓမ်မသိငျ်ဂီဒေါျနနျးခငျမွင့ျရီ..EFD Group နှင့ျ EFF Foundation.
ပထမ ကိုဗဈ စဖွဈခြိနျက မငျးသားနတေိုး သိနျးတရာလှူတယျ သတငျးကွားမိပါသညျ။နောကျ အဆိုတောျသရုပျဆောငျ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ သိနျးနှဈရာလှူတယျလိုသတငျးမှာတှေ့လိုကျ မိပါသညျ
အဆိုတောျမငျးသမီးခစြျသုဝနေဲ့ ကိုလငျးလငျး တို့ သမီးလေးတှေ ခတျေ နဲ့ သဈ ဖောငျဒရှေငျးမှလညျး သိနျး နှဈရာလှူဒါနျ းသညျ ဟုသိရပါသညျ
ခုလို ကပျဆိုးကွီး ကနြခြေိနျ တိုငျးပွညျအတှကျအားတကျသရော ရကျရောစှာ လှူဒါနျးနသေော သူဌေးကွီး ၄ ဦးနှင့ျတကှ တခွားသော အလှူရှငျအပေါငျး ကနြျရှိနသေေါအလှူရှငျမြား အားလုံး ဘေးရနျကငျးကွပါစေ.အသကျရှညျကမြျ းမာခမြျ းသ ာကွပါစေ
ပွညျသူ အပေါငျးလဲ ခု ဖောျပွပါအလှူရှငျတှေ ရဲ့ လုပျငနျး တှကေို အားပေးခငြျး.ဝယျယူခငြျးဖွင့ျ ပွနျလညျကြေးဇူးဆပျကွစို့။စာရငျးကနြျရှိသူမြား မြားစှာရှိပါလိမ့ျမညျ။ထိုလှူဒါနျးမှု အစုစုမြားတို့အား လညျးကြေးဇူးတငျ လေးစားစှာဖွင့ျ သာဓု သာဓု သာဓု ခေါျဆိုပါသညျ။အားလုံးေ လးစားလကြျ
← ကိုဗစ်ရောဂါလက္ခဏာ ပြနေလို့ ဆေးစစ်မှုခံယူရတော့မဲ့ဆုထက်ကုဋေ
၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်ကူးစက်မှု (၁၀၀၀) နီးပါး မြင့်တက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေ →
နေဒွေး နဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေကြောင်း တရားဝင်ချ ပြလာတဲ့ TIKTOK ဆယ် လီ မလေး HTANG RA